« Ary toy izany koa ianareo ; raha fatra-paniry ny zava-panahy , dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra. » (I Kor 14 12) Ho antsika mpianakavy amin’ny finoana eto Ambavahadimitafo sy ireo zanaka ampielezana rehetra. Antony : Fetim-bokatra 2020 Ry havana, ho aminareo anie ny fahasoavan’i Jesoa. Araka ny efa fantatsika dia amin’ny
« Raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra« , 1 Kor 14 12 Ny foto-drafitrasa no efa nitsangana momba ny trano fidiovana eto @ FJKM Ambavahadimitafo, fa ny fanefana izany ara-bola kosa dia mbola mila fitondrana am-bavaka sy ezaka avy amintsika. Ampatsiahivina ihany koa isika fa ny alahady 05 Jolay 2020 no
Ka dia ho masina ny tobinao, mba tsy hahita zavatra maloto eo aminao Izy ka tsy hiala aminao, Deo 23 : 15. Mitondra ny teny fisaorana ny mpitandrina Randrianarisoa Alain noho ny ezaka trano fidiovana izay vita…
« Fa maty ny finoana raha tsy misy asa » Jakoba 2 Izany no tenin’Andriamanitra hifampiarahabantsika sy hifanentanantsika, notarihin’ny fanahin’Andriamanitra hiara-mivavaka eto amin’ity FJKM Ambavahadimitafo ity. Madiva ho vita ny fanamboarana ny trano fidiovana ato atsinanan’ny trano fiangonana. Isaorantsika an’Andriamanitra ny amin’ny ezaka efa nataontsika tsirairay avy, na ny fiangonana, ny tompon’andraikitra, ny teknisiana, izay rehetra niasa